Tsvaga iyo Tembere yeLuxor muEjipitori | Kufamba Nhau
Tembere yeLuxor muEjipitori
Susana Garcia | | Ijipiti, General
Kuronga rwendo rwekuEjipitori iroto kune vakawanda uye pasina kupokana inzvimbo iyo yatinogona kuona nzvimbo dzinova chikamu chenhoroondo yevanhu. Iwo madzimambo eEgypt ayo mazana emakore akapfuura akatanga maguta uye zviyeuchidzo zvisingaite zvakasiya zvivakwa zvakawanda izvo nhasi nzvimbo dzevashanyi dzinofarira vese, senge Tembere inozivikanwa yeLuxor muEjipitori.
Handei tinomuona nhoroondo yeiyi Tembere yeLuxor uyezve chii chatichawana kana taenda kunoshanyira. Pasina kupokana chimwe chezvivakwa zvakakosha kwazvo muEgypt izvo zvinofanirwa kushanyirwa muguta reLuxor uye iri padyo neTembere yeKarnak.
1 Yekare Thebes
2 Tembere yeLuxor
3 Zvikamu zvetemberi
Iyi tembere iri mukati meiyo yaive Yekare Thebes, rimwe remaguta akakosha eEkare eIjipita iro raivewo guta guru panguva yeMiddle Kingdom neNew Kingdom. Iri mukati meguta razvino reLuxor uye isu tichiri kugona kuona zvikamu zvakakosha senge Tembere yaLuxor uye Tembere yeKarnak iyo yaiziviswa mumakiromita ayo maviri echokure nenzira ye sphinxes iyo yanyangarika zvachose. Iyo yakaumbwawo nemabhangi ekumabvazuva nekumadokero eNile necropolis pane yekupedzisira. Zita rayo revaIjipita rainzi Uaset asi maGreek vaidaidza kuti Thebes. Iyi tembere yeLuxor yaive chinhu chakakosha mukunamata mumaguta muThebes, yakatsaurirwa kuna mwari Amoni.
Este tembere yakavakwa mune XNUMXth uye XNUMX dynasties muma1400 ne1000 BC mazana emakore. Iyi tembere yakagadzirwa zvakanyanya neharahara Amenhotep III naRamses II, ayo akachengetedzwa zvikamu zvekare kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzakazowedzerwa. Zvikamu zveimba yaPtolemaic zvakawedzerwa kutembere iyi uye panguva yehumambo hweRoma yaishandiswa semusasa wemauto. Ichi chivakwa ndechimwe chezvakanyanya kuchengetedzwa kweiyo Nyowani Humambo hweEjipitori uye iine zvikamu zvakawanda zvakare kwazvo uye zvinotiratidza izvo zvakawanda zvezvivakwa zvechitendero zvenguva iyoyo zvaive zvakaita.
Kumberi tichiri kungoona iyo avenue ye sphinxes inosangana neTembere yeKarnak neanenge mazana mazana matanhatu sphinxes ayo mashoma kwazvo anosara. Pedyo neiyi nzira pane imba yechitendero yaSerapis iyo inonzi yakanyorerwa vaPtolemy, sezvo nzvimbo iyi yaive nzvimbo yekunamatira kwemazana emakore. Tinogona kuona inoyevedza pylon yakavakwa naRamses II. Iyi pylon inobva mushoko reChigiriki iro rinoreva musuwo muhombe uye isu tinoreva kune iwo musuwo mune kuvakwa kwakapetwa kunoratidzika kunge kwakapindirwa mapiramidhi uye kunoumba madziro makuru ekupinda. Iyo pylon yeRamses II inorondedzera kurwa kweKadesh uko pharao akatarisana nevaHiti. Iri raizova suwo rekupinda mutembere. Pamberi peichi pylon panenge paine maobelisk maviri ayo anosara chete nekuti imwe iri muPeace de la Concorde muParis. Pamusuwo zvakare zvifananidzo zviviri zvakagara pasi zvaRamses II naMambokadzi Nefertari vanomiririrwa kune ese mativi echigaro cheushe.
Ipapo takapinda muchivanze cheparistyle, chivanze chekutanga chetemberi. Iri ruvanze rwemamita makumi mashanu nemashanu rwakareba rine makumi manomwe nenomwe emakoramu mumitsara miviri uye pakati pane nzvimbo inoyera ine makamuri matatu akatsaurirwa Amun, Mut naKhonsu. Aya ma chapel aishanda sedura rezvikepe zvinoera. Muchivanze ichi tinogona zvakare kuona zvinyorwa zvakasiyana zvine mhemberero dzechitendero kana vanakomana va pharao. Isu tinoenda kukamuri rinotevera uko kwatinoona yekoroni nhanho yeAmenihotep III ine gumi nemana mbiru mumitsara miviri.
El Chivanze chePeristyle cheAmenhotep III ndiyo inotevera imba. Pamativi matatu emativi tinogona kuona mitsara miviri yemipumburu yenhokwe. Patio inowanikwa ne staircase uye ino nzvimbo inotungamira kune iyo hypostyle kamuri iyo ingave iri yekutanga imba munzvimbo yemukati yetembere. Iyi imba ine 32 mbiru uye yakavharwa mune yayo yekutanga fomu. Kubva pane ino kamuri hypostyle unogona kuwana mamwe makamuri ekubatsira akadai seMut, Jonsu kana Amun Hall nenzvimbo tsvene yeRoma. Mukamuri rekuzvarira tinogona kuona mbiru nhatu dzakashongedzwa nemifananidzo inozivisa kuberekwa kwaAmenhotep III. Tinogona kuenderera kukamuri raishandira sevharanda uye pakupedzisira kunzvimbo tsvene yeAmenihotep III ine zviono zvaharahara. Nzvimbo yeAmenihotep ndiyo inorondedzerwa senge remukati petembere, yakavakwa kare uye gare gare nzvimbo yekunze naRamses II. Rwendo urwu rwunotitorera nyore nyore kuburikidza nemakamuri ese atinogona kunakidzwa nechero ruzivo rwezvakanyorwa nemakoramu anoyevedza ane maumbirwo enhokwe atinozoona mumatembere awo mazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Tembere yeLuxor muEjipitori
Chii chaungaona muSarlúcar de Barrameda